အမောပြေဟာသမှတ်စု ( ၂ )
Pages: « 1234567 8910 11 12 13 14 15 » | Go Down
Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု ( ၂ ) (Read 93390 times)
သျှင်နှောင်းအိမ် (Nite.Gal) and 1 Guest are viewing this topic.
Re: အမောပြေဟာသမှတ်စု ( ၂ )
« Reply #90 on: October 17, 2014, 10:17:22 AM »
ကယ်ရီယာမပါလို့ရှေ့ မှာပဲထိုင်ပါဆိုပြီး ကောင်လေးကပြောတာနဲ့ ကောင်မလေးက စက်ဘီးရှေ့ ကနေပဲ လိုက်လာခဲ့တယ်..။
သစ်ပင်ရိပ်ကောင်းကောင်း ချုံ အကွယ်ကောင်းကောင်းရောက်လို့စက်ဘီးရပ်ပြီး ကောင်မလေးဆင်းလိုက်တယ်..။ ကောင်လေး
တွန်းလာတဲ့ စက်ဘီးကို ကြည့်မိပြီး ကောင်မလေး မေ့လဲ သွားပါတယ်..။
စက်ဘီးက ရှေ့ ဘားတန်းလဲ မပါလို့ ပါ...။
နောက်ဆုံး ထွက်သက်ထိ ချစ်သွားမှာပါ............
« Reply #91 on: November 13, 2014, 08:06:34 AM »
အဟွာလေ.. ကွကို ပေါက်ကရ ရေးရတာ နည်းနည်း အားကုန်လာလို့တူများရေးထားတဲ့ ပေါက်ကရလေးတွေ ကူးချလာတာ..
သူငယ်တန်း ကျောင်းသား ဂျော်နီ တစ်ယောက် အတန်းထဲမှာ စာသင်နေတုန်း ဆရာမကို စကား သွားပြောပါတယ်။
"ဆရာမ. တား သုံးတန်း တက်ချင်ပါတယ်။ အိမ်က တား အမထက် စာပို့ရလို့ သုံးတန်း ပို့ပေးပါ"
ဒီတော့ အံ့သြသွားတဲ့ ဆရာမက သူ့ကို ကျောင်းအုပ်ကြီး အခန်းထဲ ခေါ်သွား ပြီး အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ကလေးကို ဥာဏ်စမ်းပါတော့တယ်။
ကျောင်းအုပ်ကြီး - ၃ နဲ့ ၃ မြောက်ရင် ဘာရလဲ။
ဂျော်နီ - ၉
ကျောင်းအုပ်ကြီး - ၆ နဲ့ ၆ မြောက်ရင်
ဂျော်နီ - ၃၆
ကျောင်းအုပ်ကြီး - ဟုတ်တယ် ဆရာမရဲ့ ။ သုံးတန်းပို့ပေးလိုက်ပါ။
ဆရာမ- အို။ ဆရာကြီးက လွယ်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးတာကို။ ကျမလည်း မေးအုံးမယ်။ နွားမှာ လေးချောင်းပါတယ်။ လူမှာ ၂ ချောင်းပါတယ်။ အဲဒါဘာလဲ။
ဂျော်နီ - ခြေထောက်
ဆရာမ - ဆရာမ ဆီမှာ မရှိဘူး။ သားဘောင်းဘီထဲမှာ ရှိတာဘာလဲ။
ဂျော်နီ - အိတ်ကပ်
ဆရာမ - C နဲ့ စတယ် T နဲ့ဆုံးတယ်။ လုံးဝိုင်းတယ်။ အရသာ ရှိတယ်။
ဂျော်နီ - Coconut
ဆရာမ - လွယ်လွယ်နဲ့ မထွက်ဘူး။ ထွက်တော့လည်း ချွဲကျိကျိနဲ့။
ဂျော်နီ - ဆပ်ပြာပူပေါင်း
ဆရာမ - အမွေးထူတယ် အစေ့စားလို့ကောင်းတယ်။
ဂျော်နီ - ပြောင်းဖူး
ဆရာမ - ကဲ။ ဒါဆိုလည်း F နဲ့စပြီး K နဲ့ ဆုံးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးက ဘာလဲ။
ဂျော်နီ - Firetruck
ဆရာမ - ကဲ။ ဆရာ။ သူ့ကို ၆ တန်းသာ တင်ပေးလိုက်ပါတော့။ ကျမ မေးခွန်း အမှား ငါးခုကို သူမှန်အောင် ဖြေနိုင်တယ်။
ကဲ.. စီနီယာ ဂျူနီယာ ဘော်ဒါ အပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ ..
ပေါက်ကျော်မလည်း ဘွဲ့ နှင်းသဘင် တက်ချင်ပါတယ်.. အပေါင်းလေးနှိပ်ပြီး ပို့ ပေးကြပါ.. နော်ဝ်..
« Reply #92 on: December 13, 2014, 10:28:36 PM »
တစ်ခါကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးအုပ်စိုးသတဲ့။ တစ်ရက်တော့ အဲဒီဘုရင်ကြီးဟာ လယ်ထွန်မင်္ဂလာ ကျင်းပလိုပြီး သူ့ရဲ့ လယ်ထွန်မင်္ဂလာမှာ မြို့တော်သူမြို့တော်သားများ တက်ရောက် စေလိုသောကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း ကြေငြာမောင်းခတ်စေလေသတဲ့။
‘တိုင်းသူ ပြည်သား လူအများတို့လေ။ ဘုန်းကံကြီးမြတ်လှသော ရေမြေ့သခင် အရှင်မင်းမြတ်ကြီး၏ လယ်ထွန် မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို မနက်ဖြန်တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် မြို့သူမြို့သား အားလုံးတက်ရောက်ရန် ကြေငြာမောင်း ခတ်လိုက်သည်’
ကြေငြာမောင်းထုသူများ ထိုသို့ကြေငြာအပြီးတွင် အမတ်ကြီးတစ်ဦးရောက်လာပြီး
‘အရှင်မင်းမြတ်ခင်ဗျား ကျွန်တော်မျိုး အကြံတစ်ခုပေးပါရစေ။ ရေမြေ့သခင် အရှင်မင်းကြီးရဲ့ အမိန့်ဖြစ်ပြီး လူတွေကို ဒီအတိုင်းရိုးရိုးခေါ်တာတော့ မကောင်းပါဘူး ဘုရား။ တကယ်လို့ မလာကြရင် အရှင့်ရဲ့ သိက္ခာကျရချေရဲ့။ အဲတော့ မလာတဲ့သူကို တစ်ခုခုတော့ အပြစ်ပေးသင့်တာ ပေါ့ဘုရား’
ဘုရင်မင်းမြတ်လည်း အမတ်ကြီးရဲ့ လျှောက်တင်ချက်ကို စဉ်းစားပြီး သင့်တော်သည်ဟု ထင်သဖြင့်
‘အိမ်း ဟုတ်ပေသားပဲ ဒါဆိုအမိန့်တော်မှာ ပြစ်ဒဏ်ထည့်စေ’
ဟုဆိုသဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာသမားတို့ မောင်းထုပြီး အောက်ပါအတိုင်း ကြေငြာရပြန်သည်။
‘တိုင်းသူ ပြည်သား လူအများတို့လေ။ ဘုန်းကံကြီးမြတ်လှသော ရေမြေ့သခင် အရှင်မင်းမြတ်ကြီး၏ လယ်ထွန် မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို မနက်ဖြန်တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် မြို့သူမြို့သား အားလုံးတက်ရောက်ရန် ကြေငြာမောင်း ခတ်လိုက်သည်။……. ပျက်ကွက်ပါက သေဒဏ်။’
ထိုအမိန့်တော်ကို ကြေငြာအပြီး ခဏတွင် ထိုမင်းကြီးကိုးကွယ်သော ဆရာတော်ကြီး နန်းတော်သို့ အပြေး ရောက်လာပြီး။
‘ဒကာတော်မင်းမြတ်။ ဒကာရဲ့ လယ်ထွန်မင်္ဂလာကို မလာတဲ့သူသေဒဏ်ပေးမယ်ဆိုတော့ အပြစ်ဒဏ်က ကြီးလွန်းမနေဘူးလားဘုရား။ အဲလိုသာတကယ်ဆိုရင် အရှင်မင်းကြီး အကြင်နာတရား မပြည့်ဝတဲ့ မင်းကြီးဖြစ်နေပါပေါ့။ မေတ္တာတရားရဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ မင်းကြီး ဘယ်ဖြစ်ပါ့တော့မလဲဒကာ။ စဉ်းစားပါဦး’
ထိုအခါမင်းကြီးလည်း ဆရာတော်၏ လျှောက်တင်ချက်ကို သေချာစဉ်းစားပြီး သင့်မြတ်လှသည်ဟု ထင်သဖြင့် မူးကြီးမတ်ကြီးများနှင့် တိုင်ပင်ပြီး အမိန့်တော်ကို ပြင်ဆင်စေရာ အမတ်ကြီးတစ်ဦးက
‘အရှင်မင်းကြီးခင်ဗျား။ ရာဇာတို့၏ နုတ်ထွက်စကားသည် မပြင်ကောင်းပါဘုရား။ သို့အတွက်ကြောင့် အမိန့်တော်ကို မပြင်ပဲ ထပ်မံသာ ဖြည့်စွက်သင့်ပါသည်ဘုရား’
ဟုလျှောက်တင်ရာ အရှင်မင်းကြီးလည်း ‘ဟုတ်ပေသားပဲ’ ဟုဆိုကာ မူးမတ်ကြီး၏ အကြံပေးချက်အတိုင်း အောက်ပါအတိုင်း ပြင်စေပြန်သည်။
‘တိုင်းသူ ပြည်သား လူအများတို့လေ။ ဘုန်းကံကြီးမြတ်လှသော ရေမြေ့သခင် အရှင်မင်းမြတ်ကြီး၏ လယ်ထွန် မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို မနက်ဖြန်တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် မြို့သူမြို့သား အားလုံးတက်ရောက်ရန် ကြေငြာမောင်း ခတ်လိုက်သည်။. ….ပျက်ကွက်ပါက သေဒဏ်။ …..သေဒဏ်ဟုဆိုသော်လည်း သိပ်ကြောက်ရန်တော့ မလို။’
ထိုအမိန့်တော်ကို မောင်းထုသူတို့ကြေငြာပြီး ခဏတွင် မင်းတိုင်ပင် အမတ်ကြီးတစ်ဦး နန်းတော်ထဲ သို့ ပြေးလာပြီး လျှောက်တင်ပြန်လေသည်။
‘အရှင်မင်းကြီးဘုရား။ ကျွန်တော်မျိုးလျှောက်တင်ပါသည်။ အရှင်မင်း၏ ကြေငြာချက်သည် သေဒဏ်ဟု ကြေငြာထားသော်လည်း သိပ်ကြောက်ရန်တော့ မလိုဟုဆိုသဖြင့် လူအများပေါ့ပျက်ပျက်ဖြစ်နေပြီး ရယ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်ဘုရား။ သို့အတွက်ကြောင့် မင်းတို့၏ စကား မပြင်စကောင်းလည်း မဖြစ်စေရန်၊ လူလည်း လေးစားစေရန် ထပ်မံဖြည့်စွက်သည့်ပါသည်ဘုရား’
ဟုအကြံပေးပြန်ရာ နောက်ဆုံးတွင် အမိန့်စာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သွားလေသတည်း။
‘တိုင်းသူ ပြည်သား လူအများတို့လေ။ ဘုန်းကံကြီးမြတ်လှသော ရေမြေ့သခင် အရှင်မင်းမြတ်ကြီး၏ လယ်ထွန် မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို မနက်ဖြန်တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် မြို့သူမြို့သား အားလုံးတက်ရောက်ရန် ကြေငြာမောင်း ခတ်လိုက်သည်။…….. ပျက်ကွက်ပါက သေဒဏ်။……. သေဒဏ်ဟုဆိုသော်လည်း သိပ်ကြောက်ရန်တော့ မလို။…… သို့သော်လည်း ပေါ့တော့ မပေါ့နှင့်။’
« Reply #93 on: December 13, 2014, 10:42:46 PM »
အဘက အလကား လုပ်ပါ့မလားကွယ့်
« Reply #94 on: January 07, 2015, 12:56:07 PM »
ပထမအရွယ်...... မိဘကို ဒုက္ခပေးတဲ့အရွယ်..
ဒုတိယအရွယ်..... ယောင်္ကျားကို ဒုက္ခပေးတဲ့အရွယ်.
တတိယအရွယ်... ယောက္ခမကို ဒုက္ခပေးတဲ့အရွယ်.
ပထမအရွယ်..... မိဘကို ဒုက္ခပေးတဲ့အရွယ်.
ဒုတိယအရွယ်.... မိန်းမကို ဒုက္ခပေးတဲ့အရွယ်.
တတိယအရွယ်.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒုက္ခပေးတဲ့အရွယ်.
« Reply #95 on: January 07, 2015, 01:00:57 PM »
၁။ ဗလအားကိုး ယောင်္ကျားဆိုး
အလောင်းအစားမက်သော ယောင်္ကျားများအား ဆန့် ကျင်ကြ ။
၂။ ညကြီးအချိန်မတော် မာဆတ် ( ခေါ် )
အနှိပ်ခန်းတွင် ပျော်တတ်သော ယောင်္ကျားများအား ဆန့် ကျင်ကြ ။
၃။ အိုင်တွေ့ တိုင်း ခြေဆေး
မိန်းမမြင်တိုင်း ငေးတတ်သော ယောင်္ကျားများအား
ဘုံရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ် ခြေမှုန်းကြ..။
« Reply #96 on: January 07, 2015, 01:04:31 PM »
" ရှင်တို့ယောင်္ကျားတွေက မယူခင်က အပြောတစ်မျိုး
ယူပြီးတော့ တစ်မျိုး.... "
" မင်းတို့ မိန်းမတွေက မယူခင်က ဆိုက်တစ်မျိုး
ယူပြီးတော့ ဆိုက်တစ်မျိုး.. "
« Reply #97 on: January 17, 2015, 12:54:53 PM »
ဈေးထဲတွင် အဖွားအိုတစ်ယောက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ရောင်းနေသည် ။
ပထမ အမျိုးသမီး.. " အဖွား..သခွားသိးတစ်လုံးလောက်..."
အဖွား... " ရော့...."
" ဟင့်အင်း..အဲ့ဒါ မယူဘူး..ကြီးတာလေးပေး..."
ဒုတိယအမျိုးသမီး.." အဖွား သခွားသီး ခပ်ရှည်ရှည်လေး တစ်လုံး.."
အဖွား.. " ကဲ..ရော့..အရှည်ဆုံးပဲ.."
ထိုအမျိုးသမီးများ မပြန်ခင် နောက်ထပ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရောက်လာပြန်သည် ။
အမျိုးသမီး.. .. " အဖွား..သခွားသီး တစ်လုံး..."
အဖွား........ " သမီးကရော.ဘယ်လို သခွားသီး လိုချင်တာလဲ.."
အမျိုးသမီး... " ရတယ်အဖွား..ကြိုက်တာသာ ပေးပါ....သမီးက တို့ စားမှာ..."
« Reply #98 on: January 17, 2015, 01:03:06 PM »
" နင်နဲ့ ပထမဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့နေ့ က စပြီး..
ငါ့မှာ မအိပ်နိုင်..မစားနိုင် ဖြစ်နေတာပါဟာ.."
" အို...ဒါဆို နင်က ငါ့ကို အဲ့ဒီအချိန်ထဲက ကျိတ်ပြီး
နင်ဝယ်သမျှ..စားသမျှကို ငါပဲ ပိုက်ဆံ ရှင်းပေးခဲ့တာလေ...
အခု ငါ မွဲနေပြီ..ဟ "
« Reply #99 on: January 17, 2015, 01:25:01 PM »
အမျိုးသမီးတစ်ဦး. ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို နှိပ်ပြီး ဖုန်းခေါ်လိုက်သည် ။
အမျိုးသမီး.. " ဟယ်လို.. ဦးတိုနီရဲ လားရှင်..ကျမ ရှင့်ကို ပြောစရာရှိလို့ ပါ.."
အမျိုးသား.. " မင်းက ဘယ်သူလဲ..ငါ့ကို သိလို့ လား..."
အမျိုးသမီး.." ရှင်က ကျမကလေးတွေထဲကမှ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အဖေလေ.."
အမျိုးသား.." ဟင်...မင်းက သီတာလား..."
အမျိုးသမီး. " မဟုတ်ပါဘူးရှင်..."
အမျိုးသား ." ဒါ..ဒါဆို..ကြည်ပြာ လားဟင်.."
အမျိုးသမိး.." No.ပါ.. "
အမျိုးသား.." ဒါဆို..မူယာ ဟုတ်တယ်ဟုတ်.."
အမျိုးသားက နောက်ထပ် နာမည် သုံးလေးခု ထပ်ရွတ်ပြသည် ။ အမျိုးသမီးက နောက်ဆုံးစိတ်ပျက်လာသဖြင့်
" ကျမက ရှင့်သားရဲ့ ဆရာမပါရှင်...ရှင့်သား..ဒီနေ့ကျောင်းပြေးပြီး ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တယ်လို့သိရလို့ရှင့်ဆီ လှမ်းတိုင်တာပါ..."
Pages: « 1234567 8910 11 12 13 14 15 » | Go Up